Manheru oatmeal uye chia ine caramelized apple | Kicheni Mapepa
Manheru oatmeal uye chia ine caramelized apple
Maria vazquez | 03/04/2021 10:00 | Mapepa ane Zvibereko
Chii chinonzi husiku? Kusvikira gore rapfuura ndingadai ndisina kukwanisa kupindura uyu mubvunzo. Uye kwete nekuti mhinduro yacho haisi nyore. Husiku husiku hweoatmeal uye chia, mune ino kesi, hachisi chinhu asi poriji asi iro rakasara kunyorova husiku husiku mufiriji. Zvakareruka, handiti?
Mune mamwe mazwi, porridge umo panzvimbo yekubika oats nemukaka kana chirimwa chemuriwo pamoto, regai vazorore vachitonhora kuitira kuti oats ipinze mvura uye inyorove. Uye ndiwo maitiro andakaita hwaro hweiyi husiku oatmeal uye chia ine caramelized apple. zvimwe zviri nyore kupfuura chero chinhu chipi zvacho.
Kunyorova oatmeal uye musikana ane chinwiwa chemuriwo husiku kune zvakwakanakira. Paunosimuka iwe unofanirwa kungoipisa, kana uchida, uye wedzera chinowirirana chaunoda. Mune ino kesi ivo vaive Caramel Maapuro, zvakatonyanya kuve zvidimbu zvemuchero, nzungu kana chokoreti. Iwe unotsunga kuzviedza here?
Iyi oatmeal yehusiku uye chia ine caramelized apple chikafu chamangwanani chikuru kutanga zuva nesimba.
Recipe mhando: Desayuno
Nguva yekugadzirira: 5 M
Kubika nguva: 15 M
Nguva yakazara: 20 M
1 mukombe weamondi chinwiwa
1 tablespoon chia mbeu
3 maaspuni ane rupo akakungurutsa oats
1 mashupuni uchi
Zve appleam caramelized
1 apuro, cheka kuita zvidimbu
1 teaspoon yemafuta emuorivhi
1 supuni uchi
Isu tinosanganisa mumudziyo usina kudzivirira oats, mbeu dzechia, zvinwiwa zvemuriwo, huchi, sinamoni uye dhisiki yevanilla.
Isu tinovhara mudziyo uye tinoirega ichizorora mufiriji kanenge maawa matanhatu kana husiku hwese.
Zvakare husiku kana mangwanani isu tinogadzirira iyo caramelized apple. Kuti tiite izvi, tinopisa mafuta mashoma mupani uye toasanganisa neuchi. Kana musanganiswa uchipisa, wedzera zvidimbu zveapuro uye tinovarega vachiita caramelize, kuvashandura pavanenge vari goridhe kune rimwe divi. Kana zvoda kuitwa wedzera sinamoni uye munyu wemunyu, sanganisa uye dzima moto.
Isu tinopisa oatmeal porridge, Isa apuro nemahazelnuts pane izvi uye ushumire kupisa oatmeal uye chia neapuro ye caramelized.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Mapepa ane Zvibereko » Manheru oatmeal uye chia ine caramelized apple
Vegan Lemon Sponge Keke, yakapusa uye Fluffy
Mupunga ne cuttlefish nemaprawns